Intouch Medicare Clinic ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ Charoenkrung ဘဏ်ခွဲ - intouchmedicare
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း ချလန်ဂုန်(Charoenkrung)ဌာနခွဲမှ လာနိုင်သော နည်းလမ်းနံပတ် (1) MRT ဟိုလန်းဖုန်း (MRT Hua Lamphong)
MRT ဟိုလန်းဖုန်း (MRT Hua Lamphong) ဘူတာမှဆင်းပြီးနောက် မဟားဖူထာလမ် (Mahapruektharam) လမ်းကိုဆက်သွားပါ။ ဆေးခန်းသည် ဘယ်ဘက်ခြမ်း၏လမ်းမကြီးဘေးရှိ ဆွဲချလန်ဂုန်37 (Soi Charoenkrung 37) တွင်တည်ရှိသည်။ MRT ဟိုလန်းဖုန်း ဘူတာမှဆေးခန်းအထိ 1 ကီလိုမီတာခန့်ပဲရှိပြီး ဆိုင်ကယ်အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရထားဘူတာရုံရှေ့မှာ လမ်းလျှောက်ရန်3မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ *အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်းကို သတိပြုပါ
1. MRTဟိုလန်းဖုန်း ဘူတာမှာဆင်းပါ
2. မဟားဖူထာလမ် (Mahapruektharam) လမ်းသို့သွားရန် ထွက်ပေါက်နံပတ် (1)ကိုဖြင့်ထွက်ပါ
3. ဘူတာရုံထဲကထွက်လာတဲ့အခါ သင်ဆိုင်ကယ်သမား (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ကယ်သုံးဘီး တက္ကစီကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘူတာရုံထွက်ပေါက်မှ ဆေးခန်းဆီသို့ လမ်းလျှောက်လျှင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာမှာပဲဖြစ်သည်။
4. လမ်းလျှောက်လျှင် ဘယ်ဘက်လှည့်ပြီး မဟားဖူထာလမ်(Phruektharam)လမ်းကိုသွားပါ
5. ထို့နောက် ဆီဖယား (Si Phraya) ဆိုင်းဘုတ်ဆီသို့ တည့်တည့်လမ်းလျှောက်သွားပါ။
6. ထိုအခါ ဆွဲချလန်ဂုန်37 (Soi Charoenkrung 37)ကိုတွေ့ရပြီး 30 မီတာခန့်လောက်ဆက်သွားရင် ဘယ်ဘက်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဆေးခန်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည် *အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်း ကိုသတိပြုပါ
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း ချလန်ဂုန်(Charoenkrung)ဌာနခွဲမှ လာနိုင်သော နည်းလမ်းနံပတ် (2) BTS စဖန်းတက်ဆင် (BTS Saphan Taksin)
BTS စဖန်းတက်ဆင် (BTS Saphan Taksin)ကနေပြီးတော့ ဘတ်စ်ကား 1၊ 35၊ 75 များဖြင့်ဆေးခန်းဆီ လာနိုင်ပါတယ်(သို့) မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားများ တက္ကစီများဖြင့်လည်းလာနိုင်ပါသည်။ BTS စဖန်းတက်ဆင် (BTS Saphan Taksin) မှဆေးခန်းအထိအကွာအဝေး ၁.၄ ကီလိုမီတာခန့်ရှိသည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာချိန်ရှိပါ့မည်။ *အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်းကို သတိပြုပါ။
1. စဖန်းတက်ဆင် BTS (Saphan Taksin) ဘူတာမှာဆင်းပြီး ထွက်ပေါက်နံပတ် (3)ချလန်ဂုန် (Charoen Krung) သွားမဲ့လမ်းကိုရွေးထွက်ပါ
2. ဘူတာရုံမှထွက်လာတဲ့အခါ ဆိုင်ကယ်သမား (သို့) တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆေးခန်းကိုရောက်ရန်ဘူတာရုံ၏ထွက်ပေါက်ရှေ့တွင် အများသုံးဘတ်စကားများလည်းသုံးနိုင်ပါသည်။
3. ဘတ်စ်ကားများနှင့်ခရီးဆက်လိုပါက ဆွဲချလန်ဂုန်44 (Soi Charoenkrung)ဆီ လမ်းလျှောက်ပြီး ဘတ်စ်ကားနံပတ် 1, 35, 75 တို့ကို အသုံးပြုပြီး တလတ်နျွဲစျေး (Talat Noi) ဆိုင်းပုတ်ဆီဆင်းရပါမည်
4. တလတ်နျွဲစျေး(Talat Noi)ဆိုင်းဘုတ်ကားမှတ်တိုင်မှာ ဆင်းပြီးတဲ့နောက် နောက်ပြန်လှည့်ပြီး ဆီဖယား (Si Phraya) လမ်းသို့ ဦးတည်ပါ။ တလတ်နျွဲစျေး (Talad Noi) မှ ဆေးခန်းအထိခရီးအကွာအဝေးဟာ 250 မီတာခန့်ရှိသည်
5. ထို့နောက် မဟားဖူထာလမ် (Phruettharam) လမ်းသို့ရောက်ရှိရန်ညာဘက်ခြမ်းရှိတံတားလမ်းလေးကြောင်းတိုင်း လမ်းလျှောက်ပါ။
6. ပြီးရင် ညာဘက်သို့လှည့်ပါ ဆွဲချလန်ဂုန်37 (Soi Charoenkrung37) ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မည်၊ နောက်ထပ်မီတာ 30 အကွာသို့ဆက်သွားပါ၊ ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိလမ်းမကြီးနှင့်ကပ်နေသောဆေးခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ * အစိမ်းရောင်အဆောက်အဦး ကိုသတိပြုပါ